Nagu saabsan - Yangzhou Wooten Scaffold Co., Ltd.
Kooxda Xinxin waxaa la aasaasay 2003, kooxdu waxay ku taal Tianshan Town Industrial Park, Xaafadda Waqooyiga ee Yangzhou City, Gobolka Jiangsu, waxay dabooshaa aag 500 hektar ah, shaqaalaha jira oo ka badan 800 oo qof, shirkadda waxaa la aasaasay bilowgii oo ka mid ah meheradda galinta dhuxusha kulul, ka dib in ka badan 10 sano oo horumar iyo koritaan ah hadda waa shirarka xubnaha golaha shiinaha ee galvanized. munaarad, saxan birta birta ah, jaranjarada, tiirka laambadda, tiirka calaamadda, qaabka qalabka korontada, aaladaha birta, jirridda, rakibidda tuubbooyinka maraakiibta, iwm Sannadkii 2016, Wooten Scaffold Co., Ltd. waxaa aasaasay Kooxda, oo inta badan ku hawlan xagga wax-soo-saarka iyo iibinta qaab-dhismeedyada nooca-sacabka ah. Awoodda wax -soo -saarka celceliska maalinlaha ah waa 1000 tan, waxay la kaashanayaan shirkado badan oo kiro iyo dhisme leh oo ku yaal demostic iyo dibadda.
Shirkadda waxaa taageera koox adag oo waaxyaha naqshadeynta & teknolojiyadda u xilsaaran qaab -dhismeedka naqshadeynta cusub iyo alaabada qaab -dhismeedyada iyadoo la raacayo codsiyada mashruuca ee kala duwan.
1. Is -habeynta - Naqshado gaar ah oo ku habboon baahiyaha gaarka ah, waxaan leenahay hab -socod si loo hubiyo in macmiil kastaa helo nidaamka uu u baahan yahay.
2. Siyaasadda Tayada
Waxaan ku helnay Shahaadada Nidaamka Tayada ee ISO 9001 oo leh alaabo joogto ah dhammaan imtixaannada adag ee soo maray GB12142-2007, oo aan ka gudubnay Hanti-dhowrka Hindisaha U-hoggaansanaanta Bulshada ee Shirkadda Hantidhawrka SGS. Qaar ka mid ah badeecadaha la dhoofiyo ayaa la soo saaraa oo lagu tijaabiyaa si waafaqsan heerarka caalamiga ah sida heerka Australia/New Zealand AS/NZS standard, European EN standard, American ANSI standard oo leh shahaadada ay bixiso SGS/TUV iwm wakaaladda imtixaanka.
3. Warshaduhu waa kaamil. Wooten Scoffold ma aha oo kaliya inuu leeyahay qaab -dhismeedyo, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay galvanizing dhuuqitaan kulul, sidaa darteed tayada ayaa si fiican loo xakamayn karaa.
Beerta Warshadaha ee Magaalada Tianshan, Duleedka Waqooyi ee Magaalada Yangzhou, Gobolka Jiangsu